Kubviswa kweCannabis: Kufambira Mberi Kwako Rekodhi Rekodhi, Chivabvu 4 - Prairie State Legal Services
Kubviswa kweCannabis: Kufambisa Kare Kupara Kwemhosva Yako, Chivabvu 4
Cannabis iri pamutemo, asi zvinyorwa zvekare zvecannabis zvinogona kuunza matambudziko kubasa nekugara. Joinha isu YEMAHARA webinar muna Chivabvu 4, na1: 30pm kuti udzidze nezvekuti izvi zvekare zvinyorwa zvinogona kukukanganisa iwe uye zvaunogona kuita nezvazvo. Kunyange mamwe marekodhi ekare ehunabis achingodzingwa, dzimwe nguva unofanirwa kutora matanho ekubvisa zvinyorwa. Usarega izvi zvinyorwa zvichikudzosera kumashure! Dzidza nezve kudzingwa kwecannabis, pamwe nekwaniso yekuisa chisimbiso uye kudzingwa kwemamwe makesi ari kumashure kwako kuti ubvise kumashure kwako kwese uye nekushandura Shizha Nyowani.
Kunyoresa pachiitiko ichi hakugadzi gweta mutengi hukama pakati pako nePrairie State Legal Services. Ruzivo rwunopihwa muwebhu webhusaiti harisi zano repamutemo Kana iwe uchida rubatsiro rwemutemo pamamiriro ako ezvinhu, ndokumbirawo uende ku http://www.newleafillinois.org kunyorera rubatsiro rwemutemo kuburikidza neiyo nyika yepasirese New Leaf Illinois portal, inomhanya neCARPLS.
Ichi chiitiko chinonyorwa. Chero ruzivo rwaunogovana pachiitiko ichi ruchave ruzhinji kune Prairie State uye chero munhu aripo. Isu tinonzwisisa kudzidziswa uku kuri pamusoro penyaya yaungangoda iwe kana vamwe vanhu kuti vazive iwe yauri kufarira. Izvi zvinonyanya kuitika kana Prairie State iri kumiririra mumwe munhu mune nyaya iyo zvakare inosanganisa iwe. Prairie State ichave nerekodhi yemunhu wese anonyoresa kune iyo webinar. Kana iwe uchida kuramba usingazivikanwe, paunonyoresa kune webinar, pinda "munhu" wezita rako rekutanga uye rekupedzisira, uye shandisa email kero iyo isingasanganise zita rako kana ruzivo rwevanhu.
Cannabis Expungement, Kupararira, WEBINAR
← Ngativei Vakanaka – Ziva Kodzero Dzako Dzimba Dzakanaka Zoom Mharidzo, Kubvumbi 21 Cocktails, Mocktails, & Slider, Kubvumbi 28 →